नेविप्रा तथ्य लुकाएर मन्त्रीलाई बैरी र जनतालाई गुमराहमा राख्दै - Jalasrot.com
CallingaDefect is Defect
काठमाडौं । ‘खराबलाई खराब भन्नु पर्छ’–उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वभौम संसदमा दैनिक २ करोडको विजुली खेर गइरहेको बताउदै गर्दा राज्यका जनता ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए । र, यो तथ्यबारे विश्वास गरिरहेका छन् । सरोकारवालाहरुलाई भने यसले नराम्रो झड्का दिएको छ ।
यसको वास्ताविकता के हो भने–राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान भएको विद्युत १३५० मेगावाट मध्ये दुहबीको मल्टिफ्यूल ३९ मेगावाट र हेटौडा डिजेल प्लान्ट १४ मेगावाट गरी जम्मा ५३ मेगावाट, कुलेखानी प्रथम ६० दाेस्राे ३२ तेस्राे १४ मेगावाट गरी कुल १५९ मेगावाट हाल संचालनमा छैनन् । प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकहरुबाट उत्पादित गरेर ११८९ मेगावाट हाल दैनिक रुपमा उत्पादन भइरहेको छ । अहिले नदीको बहाव बढेका कारण सबै विद्युत गृहबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यो कुरा सर्व विदितै छ ।
डिमाण्ड र सप्लाई पक्ष कस्तो छ त ? पिक आवरमा विहान ५ बजे देखि १० बजे सम्म ११५० मेगाबाट माग रहेको छ । बिहानको १० बजे देखि साँझ ५ बजेसम्मकाे माग ८०० मेगावाट रहेको छ । यसले ७ घण्टामा ३५० मेगावाट विद्युत खेर गएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यसलाई प्राधिकरणका इन्जिनियरहरु ३५०˟७˟ १०००=२४,५०,००० युनिट हिसाब गर्ने गर्नुहुन्छ । यो युनिट भनेको खेर जाने विजुली हो । राती ११ बजेबाट विहान ५ बजेसम्म अफ पिक आवरमा ४०० मेगावाट विद्युतको माग रहेको छ । यसरी ६ घण्टामा ७५० मेगावाट विजुली खेर जान्छ । यसलाई पनि यसरी नै हिसाब निकालेर ७५०˟६˟ १०००=४५,००,००० युनिट खेर गएको विजुली मानिन्छ ।
अब यसरी हेर्दा प्रत्येक दिन खेर जाने विजुली भनेको २४,५०,००० युनिट र ४५,००,००० युनिट को कुल ६९,५०,००० युनिट हुन्छ । विद्युत नियमन आयोगले हालै जारी गरेको विद्युत महशुल दर औषतमा १०.५० पैसा प्रति युनिट रहेको छ । यसरी खेर गएको विजुलीलाई रुपैयाँमा तुलना गर्दा ६९,५०,००० युनिट ˟ १०.५० = रु ७,२९,७५,००० (सात करोड उन्तीस लाख पचहत्तर हजार) दैनिक नोक्सानी देखिन आउँछ । यो वास्ताविकता हो ।
विद्युत प्राधिकरणकाे भनाइ
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारी भन्नु हुन्छ –एनइएको ४२७ मेगावाट,आइपीपीको ४८१ मेगावाट र भारतबाट आयात गरिएको १८३ मेगावाट गरी कुल उत्पादन १०९१ मेगावाट रहेको छ । पिकआवर माग पनि १०९१ मेगाबाट छ । एनइए र निजी प्रवद्र्धकको उत्पादन केन्द्र यतिबेला पूर्ण रुपमा संचालित रहेका छन् । गएको शनिवार फ्लसिङका लागि तल्लो मस्याङदी बन्द गरियो । त्यो साधारण समस्या हो र चाडै उत्पादनमा आउँछ । रातीको अफ आवरमा १०० मेगावाट घण्टा कहिलेकाहीँ खपत हुँदैन । त्यसै खेर जान्छ । गत वर्षको यो समयको खपतको तुलनामा यो वर्ष ६ हजार मेगावाट घण्टा दैनिक प्रति आवर खपत कम भएको छ । जसले गर्दा १.८ अर्ब प्रति महिना रेभिन्यू कम उठ्छ । यतिबेला उद्योगहरु ६० प्रतिशत मात्र चलेका छन् । माग दिनप्रति दिन बढ्दो क्रममा छ । दैनिक ६००० मेगावाट घण्टा ˟ १००० = ६०,००,००० युनिटलाई रु १०.५० ले हिसाब गर्दा ६.३ करोड दैनिक घाटा रहेको देखियो । नेविप्राको जानकारी अनुसार यस्तो देखिएको हो ।
जिम्वारी कस्ले लिने त ?
दुबै तथ्याङकलाई हेर्दा ६.५ करोड देखि ७.५ करोड दैनिक घाटा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । विद्युत प्राधिकरणका सबै विद्युत गृह राती ११ देखि विहान ५ सम्म बन्द हुन्छन् । खपत नभएपछि सिष्टममा लोड मिलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले खेर जाने विद्युतको उत्पादन बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ कुरा के छ भने–स्वेदेशी पावर हाउसको उत्पादन बन्द गर्नु पर्ने छ भने उता भारतबाट १८३ मेगावाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
भारतबाट आयात गरेको १८३ ˟२४˟ १०००=४३,९२, ०००युनिट˟ ७‍‍‍.५० (सरदर) मेगावाटको दरले गुणा गर्दा ३,२९,४०,००० (तीन करोड उन्नतीस लाख चालिस हजार) दैनिक भारत गइरहेको छ । यता दैनिक साढे सात करोड घाटा, उता तीन करोड तीसलाख भारतलाई भुक्तानी गरिरहेकाे छ । खेर फालेकाे विजुलीकाे जिम्मेवारी नेविप्राले लिने कि नलिने, यी सम्पूर्ण कुराकाे जिम्मेवारी कस्ले लिने ? यहाँ जलस्रोतको उपयोगमा नेपालको उर्जा नीति गलत रहेको प्रष्ट देखिन्छ । किन यसो भइरहेको छ । यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन ? विद्युतको विकास, वितरण र बजार व्यवस्थापनमा यसलाई कमजोरी मान्ने कि नमान्ने ? राज्यलाई गुमराहमा राखेर स्वदेशको विद्युत खेर फालेर बिदेशको आयात गर्ने कुराले राष्ट्रियताको सबाल उठ्छ कि उठ्दैन ? नेपाली जनता यस कुराको वास्तविकता के भएको हो गोलमोटल भाषामा होइन कि स्पष्ट रुपमा तथ्यसहित जान्न चाहन्छन । विद्युत विकासको इतिहासमा यो एउटा खतरनाक मोड हो ।